ထူးထူးခြားခြား တိရိစ္ဆာန် နှင့် လက်ထပ်သော လူသား (၁၀) ဦး | Buzzy
ဒီစုစည်းမှုထဲမှာတော့ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ လက်ထပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လူသားတွေရဲ. ဖြစ်စဉ်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ။
လက်ထပ်ခြင်း ဆိုတာဟာ လူသားမျိုးနွယ်တွေ အတွက် အလွန်အရေးကြီးပြီး ဟိုးရှေးဦးကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာတစ်ခုပါ ။ လက်ထပ်ခြင်းဟာ လူသားနှစ်ဦး အပြန်အလှန် အလေးထားမှု ၊ မှီခိုမှု ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ၊ ချစ်ခြင်း စသဖြင့် များစွာသော အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာပါ ။ ယနေ့ခေတ် လူသားမျိုးဆက်မှာတော့ အလွယ်တကူ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုတွေနဲ့ ပြန်လည်ကွာရှင်းမှုတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် ။ ဒီစုစည်းမှုထဲမှာတော့ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ လက်ထပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လူသားတွေရဲ. ဖြစ်စဉ်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ။
ဒုက္ခတွေကနေ ကင်းဝေဖို့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ခွေးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့
Selva Kumar အမည်ရှိ အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ချစ်ခြင်းတရားကြောင့် မဟုတ်ပဲ သူ့မှာကျရောက်နေတဲ့ အန္တရာယ်တွေ ကင်းဝေးနိုင်ဖို့ ခွေးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်မှာ ခွေး နှစ်ကောင်ကို သတ်ပစ်ခဲ့မိပြီး သူ့ခန္တာကိုယ်တစ်ပိုင်းဟာ အကြောသေခဲ့ပြီး နားတစ်ဖက် မကြားခြင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဗေဒင်ဆရာက သူ့ကို ဒီဒုက္ခတွေကနေ ကင်းဝေးဖို့ ခွေးတစ်ကောင်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့ အကြံပြုခဲ့ပြီး သူဟာ တကယ်ပဲ လိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူ့ခွေးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့
အသက် ၂၀ အရွယ် Australian လူမျိုး Joseph Guiso ဟာ သူ မွေးထားတဲ့ ခွေးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီပွဲကို ပရိသတ် ၃၀ လောက်တက်ရောက်ပြီး joseph က သူဟာ သူ့ခွေးကို အရမ်းချစ်လို့ လက်ထပ်တာဖြစ်ပြီး ကာမဇောဆန္ဒတွေကြောင့် လက်ထပ်တာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ဘာသာတရားကို အလေးထားသူဖြစ်ပြီး ဒီလိုမျိုး လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်မျိုး ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆကြောင်း ဆိုပါတယ်။
သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးဟာ လင်းပိုင်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့
များစွာသော သန်းကြွယ်သူဌေးတွေဟာ ထူးဆန်းသူတွေလို့ သတ်မှတ်ခံရပြီး Sharon Tendler ဟာလည်း တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ် ။ သူမဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ Israeli resort က Cindy အမည်ရှိ လင်းပိုင်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူမဟာ Israeli resort ကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးတဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ထဲက ဒီလင်းပိုင်ကို ချစ်ခဲ့တာပါ။
Karl Langerfeld ဟာ သူ့ကြောင်လေးကို လက်ထပ်လိုတယ်လို့ ဆို
နာမည်ကျော် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနာ Karl Langerfeld ဟာ သူ့ရဲ. ကြောင်ကလေး Choupette ကို လက်ထပ်လိုတယ်လို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဆိုပါတယ် ။ အသက် ၇၇ နှစ်အရွယ် သူဟာ ဒီအမွှေးပွ ကြောင်လေးကို အရူးအမူးချစ်ပြီး သူအပြင်သွားတဲ့အခါတိုင်း သူ့ကြောင်လေး ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို တစ်ခုမကျန် ချရေးထားဖို့ သူ့အိမ်အကူတွေကို ညွှန်ကြားထားပါတယ် ။
ဆူဒန်နိုင်ငံက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ဆိတ်နဲ့ စေ့စပ်ဖို့ပြုလုပ်တဲ့အတွက် အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ ဆိတ်ကိုလက်ထပ်ခြင်းအတွက် ဆူဒန်သုံးငွေ ၁၅၀၀၀ ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ဖို့ အမိန့်ချခံခဲ့ရပါတယ် ။